Primary School Archives - MVIEC
Myanmar Vision Promise School is now offering the British National Curriculum.
We have partnered with the international organisation Promise Education to enable us to deliver high quality education in modern facilities to students in northern Yangon.
Enrolments are now open so contact us soon to secure your place.
contemporary, family-focused Christian schooling under an international curriculum.
Our schools seek to nurture and develop the whole child – physically, socially, emotionally, spiritually and culturally, by treating each child as an individual who develops at his/her own rate and equipping its students for life asaMyanmar and global citizen.
The British National Curriculum identifies what to teach but not how to teach.
We trust our teachers to use the resources provided and adapt them to their own personality and style.
We teach using themes, such as “All about Me!”
Y1- Body parts and senses
Christian Education: I am fearfully and wonderfully made!
Humanities- History, Geography
Upper Secondary-Track System
Continue to Years 10-13, IGCSE, A and AS Levels
US High School Diploma, in review process
GED Programme for 16+
What our students will become
Our Vision / ကျောင်း၏ရည်မှန်းချက်
To see our students excel in every area of life by nurturing them to become creative independent thinkers who love to learn.
ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်၊ စဉ်းစားတွေးခေါ်၊ တီထွင်ကြံဆတတ်သူများ ဖြစ်လာအောင် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခြင်းဖြင့် ဘက်စုံ ထူးချွန်ထက်မြက်သော ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို တွေ့မြင်ရန်မှာ ကျောင်း၏ရည်မှန်းချက် ဖြစ်ပါသည်။
Our Motto / ကျောင်းဆောင်ပုဒ်
Love to learn, learn to excel!
Myanmar Vision Primary School
606 Thapyay St, Htawunbe Block, North Okkalapa, Yangon, Myanmar
Primary School Photo – Jun 2019
Primary Teachers Photo – Jun 2019
Primary Staff Photo – Jun 2019
We believe in giving our studentsavoice
Children learn to manage risk in the playground
Swimming lessons during our Summer School
Summer Camp Goodbye Party 2019
Primary School Photo – Feb 2019
Primary School Photo – Jun 2018
Whole School Photo – Feb 2019
KG Class Photo – 2017
Grade2Class Photo – 2017
Whole School Photo – Nov 2017
KG Class Photo – Nov 2017
School Staff Photo – Nov 2017
Primary Staff Photo – Nov 2017
Grade2Class Photo – Nov 2017
Grade 1 Class Photo – Nov 2017
CURRICULUM - What our students learn
မြန်မာ့ရည်မှန်းချက် ကိုယ်ပိုင်မူလတန်းကျောင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားသင်ရိုးညွန်းတမ်း /မြန်မာ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၌ မှတ်ပုံတင်ထားသော ပုဂ္ဂလိက မူလတန်းကျောင်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာဘာသာကို ကောင်းမွန်ခိုင်မာစွာ သင်ယူနိုင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ မည်သည့်ကျောင်း(သို့)တက္ကသိုလ်ကိုမဆို သင့်ကလေး တက်ရောက်နိုင်ပေမည်။ အမျိုးသားသင်ရိုးမာတိကာတွင် သင်္ချာ၊ မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်၊ အထွေထွေ သိပ္ပံ၊ လူမှုရေး (စာရိတ္တ၊ရသ၊သမိုင်း၊ ပထဝီ) ပါဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကျောင်း၏ဆောင်ပုဒ်မှာ “ပျော်ရွှင်သင်ယူ၊ ထူးချွန်ထက်မြက်” ဖြစ်သောကြောင့် ကျောင်း၌ သင်ယူနိုင်စွမ်း အဆင့်အမျိုးမျိုး၌ ရှိသော ကျောင်းသားတိုင်းကို ဘာသာရပ်များအား စိတ်ပါဝင်စားဖွယ် နည်းလမ်း များဖြင့် သင်ကြားပေးရန်ကျောင်းမှ အထူးအာရုံစိုက်မည် ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ကျွမ်းကျင်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ကျောင်းသားများ၏ အနာဂတ်အောင်မြင်မှုအတွက် ပိုမိုအရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍ ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ကျောင်းတွင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား လေ့လာမှုအပေါ် အထူးအလေးထားသည်။ ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များက တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့် လွတ်လပ်စွာ စဉ်းစား တွေးခေါ်တတ်ခြင်းသည် ၂၁ရာစုအတွင်း တန်ဖိုးအရှိဆုံးသောအရာများ ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ကလေးများသည် စာသင်ခန်း ပြင်ပကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်ရန် လုံလောက်သော အခွင့်အရေးများရရှိမှသာလျှင် ကျန်းမာသန်စွမ်းသော ခန္ဓာ၊စိတ်နှစ်မျိုး လုံးကို ကောင်းမွန်စွာဆက်စပ် တည်ဆောက် ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
LEADERSHIP - Who will lead your child
ကောင်းမွန်သော ကျောင်းတစ်ကျောင်းကို ကျောင်း၌ရွေးချယ် ခန့်အပ် ထား သည့် ဆရာ၊ဆရာမ များအား ဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်သည်ကို မြန်မာ့ ရည်မှန်းချက် ကိုယ်ပိုင်မူလတန်းကျောင်းမှ ကောင်းစွာနားလည်ပါသည်။ ဆရာတစ်ဦးထံမှ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအတွက် အဓိကလိုအပ်မှု နှစ်ခု မှာ သင်ကြားရေးတွင် ကျွမ်းကျင်၍ စိတ်ရှည်စွာ သင်ကြားပေးနိုင်ခြင်း၊ အသစ်သောအကြောင်းအရာ၊ သင်ခန်းစာနှင့် ၎င်းတို့၏သဘောတရားများကို သဘောပေါက်နားလည်အောင် သင်ပြခြင်း၊ ဒုတိယအချက်မှာ ကျောင်သား၏ စိတ်ခံစားမှုအခြေအနေ ၊တစ်ဦးစီ၏ မတူညီသော သင်ယူမှုပုံစံနှင့် နေ့စဉ် စာသင်ချိန်များတွင် လိုအပ်ချက်များကို ကူညီဖြည့်ဆည်းပေး နိုင်ခြင်း တို့ ဖြစ်သည်။ ဆရာတစ်ဦး၏သင်ကြားရေးပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် သင်ယူချိန်၌ ကလေး တစ်ဦးချင်းစီနှင့် ရင်းနှီးနွေးထွေးသော ဆက်ဆံရေးတို့ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ကျောင်းသားထံမှ အကောင်းဆုံးသောအရာများ ထွက်ပေါ်လာမည်မှာ အသေ အချာပင်ဖြစ်သည်။ ဆရာ၊ဆရာမများမှ ကျောင်းသားတစ်ဦးစီအတွက် မျှော်လင့်ချက်များထားရှိပြီး ထိုမျှော်လင့်ချက်များသို့ ရောက်ရှိရန် အပြုသဘောဆောင်သော အားပေး မှု များပြုလုပ်ရသည်။ ကလေးတစ်ဦး ပညာတတ်မြောက်ရန် ပျိုးထောင်ခြင်းသည် ဆရာ၊မိဘ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ကျောင်းမှ ကောင်းစွာ သိရှိ ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကလေးတစ်ဦးချင်းစီ၏ တိုးတက်မှုကို မိဘများနှင့် ပုံမှန်ဆက်သွယ်မှု ပြုလုပ်ခြင်းကို ကျောင်းမှ အားပေးသည်။ မြန်မာ့ရည်မှန်းချက် ကိုယ်ပိုင်မူလတန်းကျောင်း၌ ကောင်းမွန်သော ကျောင်းသား၊ဆရာ ဦးရေ အချိုးကို ထားရှိမည်ဖြစ်ပြီး ကျောင်း၏ သဘော တရားခံယူချက်ကို လက်ခံသော ဆရာ၊ဆရာမများကိုသာ ရွေးချယ် ခန့်အပ် ခြင်း၊ ဆရာအရည်အသွေးမြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ် များကိုပါ လုပ်ဆောင်သည်။
FACILITIES - Where your child will learn
မင်္ဂလာဒုံကျောင်းသည်ကလေးများသင်ယူရန်အတွက် နှစ်သက် ပျော်ရွှင်ဖွယ် ကောင်းသော သင်ယူရာဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သစ်ပင်သစ်ရွက်များဝေဝေဆာဆာရှိသော ခရေပင်ရိပ်မွန်အိမ်ယာဝန်းအတွင်း၌ တည်ရှိပြီး သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများစုံလင်သော ကျောင်း စာသင် ခန်း များနှင့် ရာသီဥတုအခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင် ကစားနိုင်သော ကျယ်ဝန်းသော ပြင်ပ ကစားရန်နေရာနှင့် ကျောင်းဥယျာဉ်လည်းပါရှိသည်။ စာသင်ခန်းတစ်ခန်းစီ၌ ကလေးအသက်အရွယ်နှင့် သင့်လျော်သော ပရိဘောဂများ နှင့်အတူ လေအေးပေးစက်များကိုလည်း တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ကျောင်းစာကြည့်တိုက်နှင့် တူရိယာပစ္စည်းများ ၊ကာယချိန်အတွက် ပစ္စည်းများနှင့် မီဒီယာများအခန်းများကိုလည်း ကလေးများအသုံးပြုရန် ထားရှိပါသည်။ ၂၀၁၇တွင် ဖွင့်လှစ်မည့် မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ၆ထပ်အဆောက်အဦး၌ အံ့ဩဖွယ် Multipurpose ခန်းမဆောင် ၊ ကွန်ပျုတာခန်း၊ စာကြည့်တိုက် ၊ Coffee ဆိုင် နှင့် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ကစားကွင်းနှစ်ခုတို့ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
CO-CURRICULAR- What our students do
အရည်အသွေးပြည့်ဝသော ပညာရေးစနစ်တွင် စာသင်ခန်း၊ ကျောင်း စာအုပ်နှင့် စာမေးပွဲ စသည်တို့ထက်မက ပိုမိုပါဝင်သည်။ သင်ယူ ခြင်းကို နှစ်သက်မြတ်နိုးရန်မှာ ၎င်းတို့၏ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သင် ယူမှုများသည် လက်တွေ့ဘဝတွင် အသုံးဝင်သော အရာများကို သင်ယူနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိမြင်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပညာရေးကို မြှင့်တင်ရာတွင် လက်တွေ့ဘဝအတွေ့အကြုံများ ကို အခွင့်အရေး ရသည့် အခါတိုင်း ရနိုင်သမျှ ရယူစေသည်။ ငွေကြေးအကြောင်းသိရှိရန် သင်္ချာသဘောတရားကို အသုံးပြုရ မည့် ဈေးသို့လည်ပတ်ခြင်း၊ ကျောင်းခန်းအတွင်းရွှေငါး မွေးထား ခြင်းဖြင့် သိပ္ပံသဘောတရားအရ (ငါးများရေအောက်တွင် လေရှုပုံ) စသည့် အစီအစဉ်များကြောင့် စာသင်ခန်းသည် သင်ယူခြင်း ဖြင့် ရှင်သန် နေပေမည်။ အဖြေမှာ ကျောင်းသားများသည် စိတ်အား ထက်သန် သော သင်ယူသူများဖြစ်လာပြီး မိမိဘေးပတ်ဝန်းကျင် ကမ္ဘာ လောကကြီးအကြောင်းကို စိတ်လှုပ်ရှားစွာ စူးစမ်း လာကြ မည်။ ဂီတ၊ အားကစား၊ ချက်ပြုတ်ခြင်း၊ လက်မှုလုပ်ခြင်း အခွင့်အလမ်း များကိုလည်း ကျောင်းတွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်။ ဤ အစီအစဉ် များသည် မြန်မာ၊အင်္ဂလိပ် စသော အဓိက ဘာသာရပ်များ နှင့် သီးသန့်ရည်ရွယ် ပေါင်းစပ်သင်ကြားပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျောင်းနေပျော်သော ကျောင်းသားများသည် အနာဂတ်တွင် ထူးချွန်သည့်ကလေးများဖြစ်ရန် ရာခိုင်နှုန်းများသည်။ ကျောင်း၏ ပူးတွဲထပ်ဆောင်းသင်ရိုးသည် ဤဖြစ်စဉ်အတွက် အရေးကြီးသည်။
Enrolment - Wherealove for learning starts
ကျောင်းလစဉ်ကြေးမှာအများထက်ပိုပေးရခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံး တန်ဖိုးရှိသော ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်း ကျောင်းမှ ပေးသည်။ ကျောင်းတွင် တက်ရောက်နေသော ညီအကို၊မောင်နှမနှင့် စာသင်နှစ်အပိုင်းအလိုက် ငွေပေးသွင်းမှုများအတွက် ကျောင်းလစဉ်ကြေးကို အနည်းငယ် လျော့ သောနှုန်းထားရှိပါသည်။ အဆိုပါကျောင်းနှစ်စဉ်ကြေးတွင် မတ်လအတွင်းနွေရာသီ အစီအစဉ် အပါအဝင် တစ်နှစ်စာ စာသင်နှစ်တစ်ခုလုံးစာပါဝင်သည်။ ကျောင်း၏ ဖတ်စာအုပ်များနှင့် စာရေးကိရိယာများကို ကျောင်းနှစ်စဉ်ကြေးတွင် ပါဝင်ပြီးဖြစ်သည်။ လေ့လာရေးခရီးစဉ်ကုန်ကျစရိတ်များလည်း ယင်းအထဲတွင် ပါဝင်သည်။ သင်ယူမှုတွင် အခက်အခဲရှိသော ကျောင်းသားကျောင်းသူများအပါအဝင် ကလေးတိုင်း မြန်မာ့ရည်မှန်းချက် ကိုယ်ပိုင်မူလတန်းကျောင်းတွင် လေ့လာသင်ယူနိုင်ဖို့ အခွင့်အလမ်းပေးရန်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ဆန္ဒပင်ဖြစ်သည်။ မြန်မာ့ရည်မှန်းချက် ကိုယ်ပိုင်မူလတန်းကျောင်းတွင် အပ်နှံသူ ကျောင်းသား၏ လိုအပ်ချက်များ ကိုအပြည့်အဝ ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် တစ်ဦး ချင်းစီအပေါ် အခြေခံ၍ အကဲဖြတ်မှုများပြုလုပ်ပါမည်။ ကျောင်းသားများအားလုံး ကျောင်းဝတ်စုံဝတ်ရန် လိုအပ်သည်။ ကျောင်း ယူနီဖောင်းဈေးနှုန်းကို ယူနီဖောင်းနှင့် ပတ်သက်သော အသေးစိတ် အချက်အလက်များ ဖော်ပြထားသည့် သီးခြားစာမျက်နှာပေါ်တွင် ကြည့်ရှုပါ။ ကျောင်းအနေဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးအခက်အခဲရှိသော မိဘများအတွက် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး ခွဲတမ်းရှိ၍ အကူအညီလိုအပ်မည်ဆိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။